M hụrụ ụlọ ọrụ m na-courting pụọ pụọ na-arụ ọrụ m, mgbe ndị ọzọ na ụdị mekwuo ha njikọ aka m. Mara nke a, o nwere ike iju gị anya ịmata na agbanweela m echiche na atụmatụ m. Imirikiti mmekọrịta mụ na ndị mmadụ bipụtara na-akpali mmụọ ma na-metụtara ụlọ ọrụ karịa ịkpa mmekọrịta ọha na eze na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'ihi gịnị? Ọ dị, n'ihi ihe ole na ole:
Ikekwe echiche m dị iche n'ihi na m na-erute afọ iri ise m. Ọ dị m ka esemokwu dị na data ebe naanị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị na-azụ ahịa chọrọ ụdị ka ha nwee ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'agbanyeghị nsogbu ọ bụla metụtara mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ekwenyeghi m na m choro icho ahia nke na-ekwuputa uzo ya na nsogbu ndi mmadu. Kedu maka esemokwu mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke na-ekewa ndị na-azụ ahịa? Echere m na nkwupụta okwu mbụ nwere ike ọ dị mkpa ka e degharịa:
Ndị ahịa kwenyere na ọ bụ ọrụ dịịrị nke ika iji were ọnọdụ n'okwu mmekọrịta social ọ bụrụhaala na akara a kwekọrịtara na ndị na-azụ ahịa otu esi emeziwanye ọha mmadụ.
Enweghị m nsogbu ọ bụla na ụlọ ọrụ ọ bụla na-akwado nsogbu ọha mmadụ, mana enweghị m ike ịjụ ma ọ bụrụ na ị ga-eji nkwụghachi ụgwọ maka ụdị iji kwụọ ụgwọ ma ọ bụ taa ha ahụhụ maka echiche ha. Ọtụtụ nsogbu ọha na eze bụ nke onwe, ọ bụghị ebumnobi. Nke a adighi m ka oganihu nye m - o yikwara ka o na-akpagbu ndi mmadu. Achọghị m ka ndị ahịa m manye m iguzo, were ndị ọzọ kwenyere m, ma jeere naanị ndị na-eche otu ihe ahụ ozi.